ကောင်းစွာရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါ! သင်၏နာငြီးရတဲ့၏အန္တရာယ်ကိုဗိုင်းရပ်စ်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရန်ကြိုးစားသောအခါလက်လှမ်းညမ်း။ ကျွန်တော်ကြားရတယ်ခရစ်:အဘယ်ကြောင့်အရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများဖန်တီးခဲ့ပထမနေရာအတွက်ကြောင့်၊ကျနော်တို့ကသဘောပေါက်သောအခါတွန်းလာဖို့တွန်း၊အင်တာနက်ကိုတကယ်ရုန်းကန်များကိုအကြောဂိမ်းကစားပဲလိုမိမိတို့လက်ရရန်ယုတ်ဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ငါသည်သင်ပြောပြသွားတာပါအားလုံးအရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်ပျမ်းမျှ punter ထွက်ရှိပါတယ်။ စရာမရှိပါအဖြစ်လာသင့်ကြောင်းအံ့သြတာကြည့်ဖို့အသုံးချတဲ့နယ်ပယ်ဈေးကွက်အတွက်နှင့်ဤအကြောင်းကြောင့်၊သင်သည်သတိထားဖြစ်သင့်!, အို၊ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲပေးဆောင်ငွေချေဖို့စမတ်ဖြစ်၊ကတည်းကအရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများသည်ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ရှည်လျားသောအဝုိင်းနှင့်အလိုအသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအမှုအရာဘယ်လိုအပြုအရွယ်ရောက်ပြီးအာကာသ။ နေစဉ်ကနည်းပညာပိုင်းအဖြစ်နိုင်အတွက်အခြားအချက်အချာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုထွက်ရှိရအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်၊ကျွန်တော်ထင်၏အခွင့်အလမ်းကြောင်းဖြစ်ပျက်ကြသည်တော်တော်လေးမင်းအရွည္။ ကိုလေ့လာစူးစမ်းချင်တယ်အပြည့်အဝအတိုင်းအတာအဘယ်အရာ၏အရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်ဖို့ရှိပါတယ်နှင့်ကိုယ်အဘို့မြင်ဘယ်လောက်အံ့သြဖွယ်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါသည်? ပြီးတော့အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းအရှိန်သည်အရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ!
အရေးအပါဆုံးအရာဖော်ပြနေအရသွားသည်အကြောင်းရိုးရှင်းသောတကယ်တော့အရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများလုံးဝအခမဲ့သင်ဖို့လက်လှမ်း။ မှန်တယ်–ကျွန်တော်တို့အတွက်အောက်ပါအခြေအများအပြားနာမည်ကြီးချာထွက်ရှိသောစာသားအတိုင်းပေးသွားဖို့လက်လှမ်းဟာသူတို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စ၊မှသာကျွန်တော်တို့အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးအာကာသ။ လျင်မြန်တဲ့အကြည့်တစ်ဂိမ်းမှာကဲ့သို့ဒဏ္ဍာရီ၏လိဂ်သင်ပြောပြလိမ့်မယ်သမျှသင်လိုအပ်ကြောင်းကိုသိရန်အခမဲ့ဂိမ်းအွန်လိုင်း–သင်ယုံကြည်ကြောင်းသူတို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့အဖြစ်ပေးစေခြင်းငှါဤအချက်များအားလုံးအတွက်ပယ်ရှားရန်လိုသူမည်သူမဆိုတစ်ဦးအချပ်?, ဂိမ်းကြီးစွာသောဖြစ်ပါသည်၊ဒါကြောင့်ကိုယ့်အကြောင်းပြမှကျွန်တော်သွားနိုင်ပြေးတစ်ဦးလုံးဝတရားဝင်နှင့်အမြတ်အစွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင်ပြုလျှင်သင်တို့ကိုအခွင့်ကိုအရာအားဖြင့်အဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအထွက်ရှိပြီးသေချာသူတို့အများ၏စောင့်ရှောက်မှုယူ။ ရဲ့အမျိုးအစားအရာတစုံတခုကျနော်တို့အလုပ်မှာအရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြု–လည်တဲ့ကျနော်တို့အဖို့လောက်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုမှုတ်နှင့်အတူအခမဲ့အမျိုးသမီး XXX ဖြန့်ချိကြပြီ။ ကျနော်တို့ဘယ်တော့မှတာဝန်ခံသင်သည်တစုံတခုကိုအဘို့နှင့်ရန်ပုံငွေကိုယ်ကိုယ်လုံးဝမှတဆင့်တစ်ဦးစီးရီးမ-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောကြော်ငြာရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်စေခြင်းငှါ၊။, အရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများလိုကြီးမားတဲ့အမျိုးမျိုးအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းအာကာသ၊ဒါကြောင့်သေချာအောင်သင်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်နှင့်နောက်ကျတာထက်–သင်ချင်ကြဘူးသောဖမ်းမိခံရဖို့ဖြစ်၏မှားယွင်းတဲ့ဘက်ဒီစွန့်စားမှု!
ကျွန်တော်တို့မှာအရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများယုံကြည်ကြောင်းအမျိုးမျိုးသည်အမွှေးအကြိုင်များ၏အသက်:အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ပေးဖို့စွမ်းရည်ကိုသုံးစွဲသမျှသည်သင်ချင်ဘဲအဆပ်ဖို့ပိုက်ဆံနှင့်ဒုတိယအကြောင်း၊အများကြီးတစ်ငရဲ၏။ ဒါဟာဘယ်လိုအပေါင်းတို့အလုပ်? ကောင်းပြီ၊မယ့်အစားစဉ်းစားဖို့ကိုယ်ကိုကိုယ်ကျွန်တော်တင်ချင်ပါတယ်အားလုံးသည်ကျွန်တော်တို့၏ကြက်ဥသို့တဦးတည်းတောင်း၊ကျွန်တော်တို့မယ့်အစားပုံကြီးထက်မြက်တဲ့စိတ်ကူးဖို့တွန်းအားလုံးသောအဓိပ္ပါယ်ကိုအစားပေးအဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအထွက်အများအပြားဂိမ်းများသောအနိုင်ကစားအနှံ့အမားသောခင်းကျင်း niches။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်စအိုလိင်? ဘာအကြောင်းဆယ်ကျော်သက်? Ebony ပန္လာေ? Blowjobs?, တော်တော်များများမဆိုအသင္အား၊အလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်မြည်းစမ်းသင်အနိုင်အစဉ်အဆက်ချင်ပါသည်၊အချို့လမ်းအတွက်၊အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှာအရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ။ ကျနော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနပြုခြင်းနှင့်သင်ယူဘာဂိမ်းကစားချင်တယ်–အထူးသဖြင့်သူများနှင့်အတူကျောက်ထရံ-ခဲယဉ်းကြက်ကြားသူတို့ရဲ့ခြေထောက်! အဆိုပါရလဒ်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ချင်ပါတယ်စဉ်းစားခံရဖို့အပူဆုံးအချာများအတွက်ဆှဂိမ်းကစားမယ့်ပည္ဆိုင္ရာကျော်အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ။ ဒီအချက်တွေအပ်ဖို့အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုမှုတ်၊အကအတွက်ကူညီမှုတ်၏။ ငါတို့သည်လည်းထည့်သွင်းဂိမ်းအသစ်လစဉ်၊များ၏ထိပ်တွင်အ ၄၀+ဖြန့်ချိကျနော်တို့လောလောဆယ်တွင်ရရှိနိုင်စေ။, လို့ပြောလုံလောက်လျှင်သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးချစ်သောသူကြီးမားနံပါတ်များ၊ဒီအချက်ဟာအလွန်ကြီးစွာသောအနည်းငယ်သာအစက်အပြောက်။
ပြောဆိုကြကုန်အံ့အကြောင်းနည်းနည်းဂရပ်ဖစ်တွင်အရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ:အကြောင်းရင်းဖြစ်ခြင်းသူတို့ကြည့်လုံးဝကြောက်မက်ဘွယ်နှင့်တော်တော်များများအတွက်လူတိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းအာကာသသဘောပေါက်ကြမယ်ခုန်နှင့်စည်းအဦးယှဉ်ပြိုင်မှုမှကြွလာသောအခါအလှူကောင်းကြောင်းဂိမ်းများကြည့်ရှုစိတ်ကူး။ ဘယ်လိုများကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲဤအောင်မြင်ရန်၊သင်မေး? နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ဘယ်အရာကိုထုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းကစားချင်တယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးအင်ဂျင်မှရရှိနိုင်စေ။, အခြားအေးမြ၏အရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းပလက်ဖောင်းသင်ဖွင့်နိုင်ကစားရန်အရာအားလုံးကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်ဖို့မလိုဘဲအမှန်တကယ်ဒေါင်းလုပ်တွေအသင့်ဒေသခံကွန်ပျူတာ။ ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲ။ ကောင်းစွာ၊တစ်ခုလုံးကိုအပြေးဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့်သင့်ရဲ့ဘရာစတဲ့လူအပေါ်အ MacOS သွားကြဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဂိမ္းသင့်ရုံကန့်သတ်နိုင်ဖို့ကန့်သတ်ထားသူများအပေါ်ပြတင်းပေါက်၊ဒါကြောင့်-အခြေပြုချဉ်းကပ်မှုအကြီးတော်တော်ရိုးရှင်းရွေးချယ်မှုသည်ငါတို့အဘို့အအောင်။, ကျွန်တော်လည်းရဖို့စီမံခန့်ခွဲတွင်အချို့သောအမှန်တကယ်မယုံကြည်နိုင်လောက်ဂရပ်ဖစ်အကျဉ်းချုပ်လိုလျှင်တည်းဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်–တစေ့တစောင်းမှာခရီးဒီရမည်ကိုပြသသင်ဘယ်လောက်အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်း။
ကျွန်တော်ဟာသဘာဝအကြံပြုသောအရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများသည်အကောင်းဆုံးအရာအစဉ်အဆက်ကတည်းကလုပ်တယ်အပေါ်နောက်ဆုံးများအတွက် ၄ နှစ်ပေါင်း။ သို့သော်၊ကိုယ့်ကြောင့်အများကြီးပိုင်မဆိုလိုပါဘူးငါအပ်နိုင်မှပြန်ပေးဆွဲသင်ချက်ချင်းနှင့်အလုပ်သင်များတူညီသောလမ်းခံစားရ။ သဘာဝအရ၊အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားငါသည်သင်ပေးခြင်းကိုပျော်မွေ့ရန်နိုင်စွမ်းကိုအရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲအဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ခံရဖို့ကြောက်သို့မဟုတ်ထိတ်လန့်ကတည်းက၊သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်၊သင်ရုံတခြားနေရာသွားကြပြီးပါပြီတစ်ဦးအားကြီးသောအချိန်!, ဒါကြောင့်–သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်လာမှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအပေါ်အင်တာနက်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစက်အပြောက်အခုအချိန်မှာဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်အတူအရွယ်ရောက်အာရုံစိုက်သလား။ တက်လက်မှတ်ထိုးထက်လျော့နည်းအတွက် ၆၀ စက္ကန့်နှင့်စတင်ဂိမ္းဖြောင့်အားဖြင့်သင်၏ဘယောက်ဆာ–ဝီသင်သည်အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်!